रोचक रमाइला तथ्यहरु, पढेर तपाईं पनि छक्क पर्नु हुनेछ ! | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १९, २०७६ chat_bubble_outline0
हज्जारौं वर्ष पहिलेदेखि नै घाम तथा पानीबाट बच्न छाता ओढ्ने चलन रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालमा कतिपय समाजमा त छाताको आकार र रंगले तिनीहरुको सामाजिक हैसियत समेत दर्शाउने गथ्र्यो । छाताको आविष्कार कहिले र कसले गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म किटानी भन्न सकिने स्थिति छैन । तर इतिहासकारहरुको मतमा छाताको आविष्कार चीनमा भएको हो ।
यो बर्बादी !
बितेको २५ वर्षभित्रमा यस संसारका एक तिहाई प्राकृतिक स्रोतहरु नष्ट भइसकेका छन् । यसो हुनुको मूल कारण चाहिँ विश्वमा अनियन्त्रित रुपमा बढ्दो जनसंख्या र प्रकृतिमाथि मानिसको अन्धधुन्ध हमला नै हो । यसको परिणामस्वरुप, जंगल, नदी तथा समुद्रमा पाइने ३० प्रतिशत जीवजन्तुहरु यस विश्वबाट लोप भइसकेका छन् ।
प्रत्येक ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र हुन्छ । कुनै ग्रहको कम हुन्छ त कुनै ग्रहको बढी । अमेरिकाको मानवरहित यान ‘पायोनियर– ११’ ले पत्ता लगाएअनुसार, शनिग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वीको भन्दा १,००० गुना बढी शक्तिशाली छ । तर बृहस्पति ग्रहको भन्दा चाहिँ २० गुना कमजोर । हेक्का रहोस्, उक्त अमेरिकी यान सन् १९७९ मा शनिग्रहको २०,८०० किलोमिटर नजिकबाट उडेको थियो ।
अति छिटो छरितो वा फूर्तिसँग काम गर्ने मान्छेलाई ‘बिजुलीजस्तो छिटो’ भन्ने चलन हामीकहाँ छ । ‘बिजुलीजस्तो छिटो’ भन्नुको अर्थ नै अति छिटो भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा, बिजुली ‍(प्रकाश) को गति पनि अति छिटो नै हुन्छ । एक सेकेण्डमा प्रकाशले २,९९,७६२,४५८ मिटरको दूरी पार गर्छ ।
हाम्रोतिर उल्लूको अर्थ हुन्छ, मूर्ख, बुद्धू ! त्यसैले उल्लू (Owl) को अर्थ मूर्ख, बुद्धू नभएर बुद्धिमान पनि हुन्छ भन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर प्राचीन ग्रीकमा उल्लूलाई बुद्धिको देवताको रुपमा लिने गरिन्थ्यो र ग्रीक भाषामा (Owl) को अर्थ बुद्धिमान भन्ने हुन्छ । वास्तवमा, रात्रिचर यस प्राणीले मूसा, सर्प, बालीनालीमा लाग्ने कीरा फट्यांग्राहरु खाएर कृषकहरुलाई मद्दत गर्ने भएकोले प्राचीन ग्रीकवासीहरुले यसलाई बुद्धिको देवताको रुपमा लिएका हुन सक्छन् ।
पृथ्वीको तौल बढ्दैछ !
रुसी वैज्ञानिकहरुले जनाएअनुसार, पृथ्वीको तौल लगातार बढिरहेको छ । तर तौल बढ्ने यो गति अति सुस्त रहेको छ । वार्षिक रुपमा बढेको पृथ्वीको तौलको आधारमा रुसी वैज्ञानिकहरुले जनाएअनुसार, गत ५०० मिलियन वर्षमा पृथ्वीको कूल तौलको एक प्रतिशत तौलको सय हिस्साको एक हिस्सा तौल बढेको छ ।
अफ्रिकाको सहारा मरुभूमिमा बालुवाका अग्ला अग्ला पहाडहरु पाइन्छ । ती पहाडहरुमध्ये कुनै कुनैको उचाई त १४०० फुटसम्मका पनि हुन्छन् ।
पृथ्वीकै सबैभन्दा विशाल मरुभूमि मानिएको सहारा मरुभूमिको क्षेत्रफल ९० लाख वर्ग कि.मी. मानिएको छ । यो भनेको पृथ्वीको कूल जमीनको १/८ भाग हो ।
हाम्रो शरीरको हड्डी अद्भूत शक्तिशाली हुन्छ । शक्तिमा यो शक्तिशाली धातु ग्रेनाइटजत्तिकै हुन्छ । यो कति शक्तिशाली हुन्छ भने एउटा मचिसको बट्टा आकारको हड्डीले एक टन तौल थाम्न सक्छ ।
पृथ्वीको एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमामा एउटा सागर छ, जसको नाम ल्याटिन भाषामा Mare Imbrium अर्थात् वर्षाको सागर (Sea of Rains) राखिएको छ । रोचक त के छ भने, उक्त सागरमा एक थोपा पनि पानी छैन ।